Fivarotana Tantanin’ny Mpitsoa-ponenana Manampy Amin’ny Fahazoana Sakafo Ara-pahasalama Ao Pennyslvania, Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2016 16:42 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Español, bahasa Indonesia, Français, 简体中文, 繁體中文, English
Pradip Upreti, eo afovoany, manangona talantalana ao amin'ny Erie, magazay Pennsylvania, UK Supermarket. Sary: Erika Beras
Ity lahatsoratra avy amin'i Erika Beras ity dia nipoitra voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 24 Novambra 2016. Navoaka teto indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Ampahany be amin'i Erie, Pennsylvania no tany efitra ara-tsakafo – tsy mahazo sakafo vaovao sy mahavelona ny olona. Saingy ao amin'ny ampahan'i Erie, ao amin'ny manodidina ny Parade Street ilany atsinanan'ny tanàna, miroborobo sy miavaka ireo toeram-pivarotana tantanin'ny mpitsoa-ponenana.
Ao amin'ny UK Supermarket, mamoaka harona misy legioma avy ao anaty vata fampangatsiahana i Samantha Dhungel. Ahitana tongolobe, baranjely ao anatin'ny kalesiny, saingy maka legioma izay fantany amin'ny anarany Nepali ihany izy. Ravina maitso ampiasain'ny vadiny Nepaley amin'ny fahandroan-tsakafo.
“Manampy betsaka izany satria tsy hahita zavatra toy izao ao Walmart na K-Mart na any amin'izay iantsenan'ny olona ianao,” hoy izy.
Ary tsy hahita zavatra tahaka izany any amin'ny ankamaroan'ny tanàna ianao. Talohan'ny nisokafan'ity magazay ity herintaona lasa izay, nisy magazay roa misokatra mandavataona sy toeram-pisakafoanana maivana teo amin'ny manodidina. Nivarotra sakafo tsy mahavelona izy rehetra ireo, hoy i Alex Iorio, mpampianatra momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana ao Erie. Nolazainy tsy mitovy amin'izany ity toerana ity
“Ahitana vary an-taoniny, voamaina feno, lafarinina, zavatra tahaka izany ao amin'ity magazay ity,” hoy izy, “tsaramaso sy pitipoà betsaka, izay manankarena proteina. Ka sokajiana ho mahasalamana izany rehetra izany, ary tia mitondra entana tahaka izany ireo tompon'ny magazay satria manome taham-pivelomana lava kokoa ireo.
Tsy tany efitra ara-tsakafo intsony ny toerana iorenan'ny UK Supermarket. Iray amin'ireo magazay 20 fivarotana entana madinika niroborobo tao Eria tao anatin'ny folo taona, ary tantanin'ny mpitady fialokalofana taloha.
Ahitana sakafo vaovao sy vary feno ny ankamaroan'ny magazay. Taloha, raha te hividy legioma, vovo-katsaka, sy voanjo vaovao ny olona ao amin'ny manodidina, tsy maintsy nandeha fiara manerana ny tanàna na tany amin'ny tanàna manodidina.
Roa taona lasa izay, nanokatra ny UK Supermarket i Pradip Upreti, Nepaley nitady fialokalofana.
«Nijery tao amin'ny fiarahamonina aho ary nahita fa tena mila fanokafana magazay Aziatika ao Erie, izay tsy mba ananantsika betsaka,” hoy izy.
Tsy niezaka namaha ny olan'ny tany efitra ara-tsakafo izy- tahaka izany koa ireo tompon'ny magazay. Tian'izy ireo fotsiny hahazo karazan-tsakafo manokana ny mpialokaloka ao Erie, izay mandrafitra ny 10 isan-jaton'ny [mponina ao an-]tanàna.
Mandeha fiara lavitra ny olona ary mividy zavatra tahaka ny ampalibe sy pizza halal. Avy eo, amidin'izy ireo indray amin'ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo izany entana izany. Nahita fanokafana fihariana teto i Upreti.
“Te hanao zavatra betsaka kokoa aho, tahaka ny tsy dia tsara loatra amiko ny mahita ireo olona marobe tsy maintsy mankany Pittsburgh na Cleveland hividy zavatra any amin'ny fivarotana enta-madinika [entana fihinana],” hoy izy.
Ahitana ny ankamaroan'ny sakafo Aziatika Atsimo ny magazain'i Upreti. Misy magazay irakiana ahitana karazan-tsakay marobe ihany koa manerana ny lalana. Eny an-jorony kosa misy magazay Irakiana iray mpivaro-trondro sy hena tahaka ny henan'ondry sy henan'osy. Ary misy magazay am-polony mahery tahaka azy ireo ihany koa ao.
Nilaza i Upreti fa nahazo mpanjifa avy amin'ny lafivalo izy, ary mponina maharitra ao amin'ny faritra ny ankamaroan'izy ireo.
«Ny indiana sy ny Nepaley no vondrona ara-poko roa lehibe indrindra, miaraka amin'ny Afrikanina, Arabo Amerikanina ary koa Vietnamianina sy ny Birmanina,” hoy izy.
Mahafantatra ity toerana ity i Iorio avy ao amin'ny departemantan'ny fahasalamana satria mitantana magazay ara-pahasalamana ao Erie izy, izay manampy ny tanànan'i Pennsylvania izay ahitana tany efitra ara-tsakafo.
Mitsidika ny magazay izy hahazoana antoka fa manana sakafo ara-pahasalamana ao amin'ny talantalana tery sy feno entana. Raha manao izany izy ireo, dia mahazo valisoa-100dolara ny taona iray, kalesy fiantsenana vaovao na talantalana fasiana legioma. Tsy fantany izay fivarotana enta-madinika [entana fihinana] falehan'ny olona talohan'ny niroboroboan'ireto magazay ireto.
«Nisy foana ireo magazay sasantsany teny an-joron-dalana,” hoy izy. Saingy mihevitra izahay fa mividy izay azony sy mahazatra azy ny olona.”
Tsy vahaolana feno ny fananana ireo magazay ireo. Na dia misy vary feno sy legioma aza ao, mbola maka zavatra hafa ny olona. Tahaka an'i Swapna Sibarim, izao feno entana ny kalesy fiantsenany.
Satria mandoa vola nividianana legioma, vary sy yogourt izy, misy ireo zavatra vitsy hafa – tahaka ny fangaron-tsakafo ho an'ny tsindrin-tsakafo mamy.